Mararka qaarkood files junk ka muuqdaan intii ay ahayd inuu u haysan kartid iPhone. Sidoo kale waa run in files junk qaadan kartaa nooc kasta oo gudahood aad iPhone iyo waxa muhiim ah in aad haysato telefoonka lacag la'aanta ah ee files junk kuwan. Dhibaatada waxa ay tahay in ay jiraan noocyo badan oo si files junk in la nadiifinayaa in inta badan baad ku garanaysaa ma halkaas si ay u bilaabaan ka. Nasiib wanaag idiin, ayaa waxaad u timid inaad meel sax ah. Tani waa sababta oo ah waxaan doonayaa in aan la idiin siinayo Hanuuniye buuxa si ay u nadiifiyaan aad iPhone gabi ahaanba. Waxaannu doonaynaa in ay ku tusaan sida ay u nadiifiyaan aad iPhone ee file kasta junk bilabo iyo habka loo hagaajiyo shaqada iyo waxqabadka aad telefoon. Bal aan ka bilowno dhibaatada ugu badan ee isticmaala iPhone.
Qaybta 1. Sidee loo nadiifiyaa "kale" ee aad taleefan
Qaybta 2. Sidee loo nadiifiyaa wallpaper aad iPhone
Qaybta 3. Sidee loo nadiifiyaa xogta app aan loo baahnayn ee aad taleefan
Qaybta 4. Sidee loo nadiifiyaa files qashinka ah ee aad iPhone
Qaybta 5. Sida loo tirtiri aad iPhone joogto ah
Dhibaatada ay leedahay "kale" waa in ay degan badan oo boos aad iPhone oo sidaas daraaddeed wuxuu kaa badbaaadin karaa ka kaydiyo wax kale oo aad telefoon. Tani waxay awoodo ugu dambeyntii qasan qaab aad telefoonka ee sidoo kale. Haddii aad u yaabsan halka xogta "kale" ka yimaado, waa isku-dar ah khasnado, cookies iyo farshaxanka album ka mid ah macluumaad kale oo la kaydsan mar kasta oo aad ka soo dejisan iyo rakibi file ah. Halkan sida ay u nadiifiyaan "oo kale."
Talaabada 1: Ma gurmad ah ee dhammaan xogta ku saabsan telefoonka. Taas waxaad ku samayn kartaa iCloud.
Talaabada 2: jeeg Double in aad si sax ah u xoojiyaa xogta oo dhan inta aadan u gudbin tallaaba saddex.
Talaabada 3: Dib u celi aad iPhone. Tubada on markaas Settings Guud, Dib u celi dibna masixi oo dhan Contents iyo Settings.
Talaabada 4: Tallaabada saddex masixi doono xogta oo dhan iyo tirtiraynaa, dhammaan xogta ku meel gaar ah in ka dhigaysa "kale". Waxaad markaa waa in aad dib ka soo iCloud iyo iPhone soo celin nadiif xogta "kale" noqon doonaa.
Haddii aad isticmaalayso macruufka 7 aad dareentay doonaa in aad wallpaper waxaa had iyo jeer Tirraa ay barnaamijyadooda iyo haddii aanad joogi karin inay awoodaan inay si buuxda u arki. Macruufka ayaa 8/9 xalliyo dhibaatadan noo oggolaadaan in aad u guurto Chine oo dhan ka bogga ugu weyn si aad u hesho screen maran iyada oo wallpaper in hadda lama Tirraa. Halkan sida loo sameeyo.
Talaabada 1: Aad screen guriga iyo tuubada on app kasta iyo hay fartaada ilaa calanka u bilaabi ruxaya.
Talaabada 2: In la abuuro bog cusub, jiidi oo dhan Chine ee ka baxsan si ay ugu bogga dambe ee xaadirkan jira gurigaaga screen iPhone. Ha Chine ee halkaas tago ka dibna riix badhanka Home inuu ku badbaadiyo bogga cusub. Haddii aad isticmaalayso macruufka 8/9 waxaad yeelan doontaa bog cusub oo kaliya muujinaysaa aad wallpaper.
Xogta loo baahnayn aad iPhone si dhab ah xaqiro karaa qaab telefoonka aad iyo xitaa in ay aad u adag tahay updates macruufka in lagala soo bixi oo ku rakiban. Xogta Tani waxay noqon kartaa qaab ah files ku meel gaar ah oo mararka qaarkood aad khasnado browser in lagu kaydin karaa mar kasta oo aad isticmaasho browser ama app ah internet ka. Waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u kala cadeeyo, kuwaas oo xogta la rabin ka phone oo halkan sida aad sameyn karto si fudud.
Si cad cad Cache iyo taariikhda dhirta aad iPhone u tag "Settings" iyo hoos si aad u hesho "Clear History" iyo Kukiyada oo cad iyo Data ". Tubada labada iyaga ka mid ah oo xaqiijin tallaabada.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa app macruufka ah in ay nadiifiso files ku meel gaar ah iyo cookies ka iPhone. Chine Kuwani buuxiyo boos ka heli aad iPhone halkan ka qasbo macruufka si toos ah u nadiifi files aan loo baahnayn. Waa in ay eegaan wax sidan oo kale.
Files qashinka ah ee aad iPhone sidoo kale saamayn ku yeelan karaan waxqabadka qalab aad iyo hortago update macruufka ah in la si fiican u rakiban. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad u nadiifiso files junk ka telefoonka, laakiin mid ka mid ah aan hoos ku qeexi doonaa oo la qaban karo iPhone laftiisa la isticmaalayo iCleaner Pro. Halkan sida.
Tallaabo 1: Ku rakib iCleaner Pro ka Cydia
Talaabada 2: iCleaner Open Pro dibna riix on Falanqeeyaan si ay u arkaan tirada files qashinka iyo files dhabta ah in la tirtiro. Marka aad ku qanacsan tahay, guji files junk nadiif ah ilaa iyo ay dhammaan doonto in la tirtiro.
Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in masixi oo dhan ka kooban xogta ad ku saabsan iPhone joogto ah marka aad rabto in aad iibiso telefoonka ama u dhiib qof. Markaas waxa ugu horeeya ee soo socda in aad maskaxdaada waa in uu ahaado shaqo keddibna aad iPhone. Waxaad u isticmaali kartaa si masixi ku jira oo dhan iyo goobaha in ay dib u aad iPhone in asalka ah. Si kastaba ha ahaatee, waa in runta ah? Ma run ahaantii. Waxa kaliya u eg kaliya oo ka mid ah sanduuqa, laakiin xogta tirtirayaa weli la soo kabsaday karaa aalad kabashada xogta. Taasi waa in la yidhaahdo, arimahaaga gaarka ah waa khatar.
Si joogto ah u tirtiri aad iPhone si aan wax xadin kartaa gaarka ah ka hore iPhone, sida ugu wanaagsan ee ay tahay in ay isticmaalaan caleemaha masaxa daaqadda ah oo xog xirfadeed si ay u oofiyo. Halkan waxa aad isticmaali kartaa SafeEraser Wondershare . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad tirtiri aad iPhone oo aan wax xogta shakhsi kaga tegey mid click. Uma baahnid in aad walwasho ku saabsan wax kasta ka dib markii mid ka mid click. Just download version maxkamadda hoose si aad u leeyihiin a day hore, ama aad ku akhrisan karaa tilmaan ku saabsan sida joogtada ah tirtiro iPhone an halkan.
Ha ogolaan in iPhone Gebi Video Tutorial
Sida loo celi iPhone aan ID Apple
Sida loo View tirtiray Messags on iPhone 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Tutorial sidii aad u hagaagsan Photos ka Computer si ay iPhone
> Resource > iPhone > Full Tusaha Nadiifinta aad iPhone